Ukukhuthaza Ukuqashelwa Kwobuso Kwabaphathi Abasebenza Ngomthetho Abasebenza Ikhamera Yomzimba-Worn | Izixazululo ze-OMG
Ukukhuthaza Ukuqashelwa Kwobuso Kwabaphathi Basezomthetho Zomthetho I-body-Worn Camera
Ukuqashelwa ebusweni kungashintsha ukuphepha kwamatheminali wethu omoya, izindawo zokusebenza namakhaya, noma kunjalo, ngokugunyazwa komthetho, lapho umuntu engathemba ukuthola ukutholwa okukhulu kwalolu hlelo olusha nolususa phansi, belungahambi kahle. Izinsolo zokungalungile, okungekho emthethweni, ukubekwa phambili kanye nokungasebenzi kahle sekuphenduke indinganiso. Kunoma ikuphi, inkinga enkulu 'ukusetshenziswa': izinjini ze-AI ezilawula ukuhlelwa kobuso kufanele zilungiselelwe leli qiniso lamanje. Ngaphezu kwalokho, ngokubhekisisa, izisongeli eziseduze nokusetshenziswa nokuhlelwa kwendlela emisha kufanele zakhiwe ngendlela efanele.
Ukuqashelwa kobuso ekuqaleni bekuhloselwe ukuqinisekiswa kobuntu nokulawulwa kokungena, ukusebenza ezimeni ezilawulwayo nokuqinisekisa ukuthi umuntu uqobo ayiqinisekisa ukuthi ungubani. Njengamanje amakhamera ashaqeka, ehlukanisa ubuso obunye nohlu lokubuka. Lokhu ngokwako kuhlushwa ngenkathazo. Kunoma ikuphi, lapho kunomdlalo, kwenzekani ngokushesha? Ngabe yiziphi izindlela izinhlelo ezingakwazi ukumelela ngazo ikhwalithi yolwazi, izimo zemvelo kanye nemiphetho yokuthola amaphuzu? Ngabe abasebenzisi bazokwazi ukuhambisa ukuqoqeka kuphi kusuka emisha baye emiphumeleni?
Njengoba ukwabiwa kwesamba manje sekuhamba, kungahle kube khona unyawo olwanele lokunquma lobu bunzima. Amandla wamaphoyisa azama ukuqashelwa ebusweni, asebenza amacala okusetshenziswa. Kusenomsebenzi omningi okufanele wenziwe, kepha impendulo kuleyo nselelo 'yokusetshenziswa' ingaba ngqo phambi kwabo.
Esontweni eledlule izindaba zokuthi i-FBI ibizama ukuqashelwa ubuso e-Amazon zihlangatshezwe ngezigameko ezethusayo zokwethuka ezivela ehholo lezokuphepha ezikhethe ukuqashelwa kobuso emfunweni yomthetho ziyesabeka. Kwanele. Njengoba kwenzeka, imodeli okukhulunywa ngayo yi-FBI lapho ubungase busetshenziswe khona emisha yayicishe ibe nengxabano encane engacatshangwa: ukuhlunga inani elikhulu lezikhathi ezide zevidiyo eqoshiwe yokubukwa komdubuli weVegas, uStephen Paddock. "Besinabasebenzi nochwepheshe, abayisishiyagalombili kukho konke esikwenzayo, besebenza usuku lonke, nsuku zonke amasonto amathathu bebhekene nokuqoshwa," kusho iPhini Lomqondisi Womsizi weFBI uChristine Halvorsen etshela umhlangano we-AWS ngoNovemba.
Yize izinhlangano eziningi zokugunyazwa ngumthetho zisebenzisa ukubonwa kobuso ukuhlakaza ifilimu erekhodiwe yevidiyo, ukusongela isikhathi nokuzikhandla, kunzima kakhulu ukusebenzisa ngokuqhubekayo, empeleni. I-arithmetic yokubheka umuntu obukeleyo endaweni evulekile evulekile yokuqhathanisa namarekhodi amancane wewashi kudonsa ukuqashelwa kobuso ngangokunokwenzeka. Izisekelo ezinhle kakhulu nje ezingashintshana. Ngakho-ke, kusamangalisa ukwamukelwa kobuso obusezingeni eliphansi ngokumangazayo okusetshenziswa emaphoyiseni ajwayelekile. Kunoma ikuphi, lokho kuzoshintsha.
Amandla amabili avivinya ezinye izindlela zokubona ubuso njalo ngamaphoyisa aseMetropolitan eLondon. Isikhulu uCressida Dick sathi ngonyaka owedlule ukuthi ukuhlonishwa kobuso "kuyathuthuka futhi kuyaqhubeka futhi kuba ngcono njalo ... Ngicabanga ukuthi ukuvuleka kungalindela ukuthi sicabangele ukuthi singakusebenzisa kanjani lokhu kusungula futhi sibone ukuthi sinamandla futhi sikhiqiza yini." Kepha, ngoDisemba, lapho amaMet Police amisa iveni yokubheka esifundeni saseSoho esinomuzi wamakhamera aphahlwe ophahleni ukuhlola izixuku zikaKhisimusi zibhekane nenqwaba yamawashingi ezidingekayo, kwaqubula ukusabela okuhlukile kwabakhankasela ezokuphepha. Induna yeBig Brother Watch ikubize ngokuthi “ukusetshenziswa kabi okwesabekayo kwesikhathi samaphoyisa nokuvula imali” futhi wathi “sekwephuze kakhulu ukuthi amaphoyisa alahle lo mshini oyingozi futhi ongaphucukile.”
Ngokubona ama-engeli angabazekayo kulokho okusha, i-Met Police icacise ubuhlakani bayo ukuthi bangene ngaphakathi. U-Ivan Balhatchet, ongumholi ophambili weMet wokuqashelwa ebusweni, uthe ngesimemezelo sangoDisemba wathi “siyaqhubeka nokuzibandakanya nabalingani abaningi, abanye abakuphonsela inselele ngempumelelo ukusetshenziswa kwethu kwalobu buchwepheshe; ukuze sikhombise ukuqonda futhi siqhubeke nezingxoxo eziwusizo, samukele abantu nemibuthano enezindlela ezingafani ekusebenziseni kwethu ukuqanjwa kobuso kuleli lungiselelo. ”
Esikhundleni sokuqashelwa ebusweni, ama-bodycams asanda kuqaphela ukwabiwa kwesisindo. Lawa magajethi e-video agqoke umzimba manje ahlobisa imvunulo yamaphoyisa emhlabeni wonke, enikeza ubufakazi bokuphatha, inhlala-kahle esemthethweni nokududuzeka okuvulekile. Ama-bodycams aqopha ifilimu ukuze ilayishe kabusha zibe yizinhlaka zokugcina impahla ezibonakalayo noma ezinamafu. Amanye ama-bodycams ngokungeziwe asakaza bukhoma ividiyo emuva kumakamelo okulawula. Abanye baxhuma kuma-holsters ezikhali ukuze kubangele ukuqoshwa kwevidiyo. Njengoba omakhalekhukhwini beya phambili, izinhlobo zamanje zezizindikimba ezithembele ezigabeni zamaselula zisetshenziselwa ukwenza zonke izinto zibe namandla amakhulu. Lokhu kusho ukuthi intuthuko emibili izohlangana. Ukuqashelwa kobuso kumzimba wesidumbu kuyisigaba esilandelayo. Inika amandla izikhulu ngamalungiselelo wewashi ezidingekayo, abantu abanomdlandla, izingane ezilahlekile, abantu abadala abangakwazi ukuzivikela… Ukugqwala kuyaqhubeka.
Ngaphezu kwalokho, sekuqalile nje.
NgoDisemba, ngenkathi iLondon ixoxa ngeveni yayo eluhlaza, elinye icala lokuqashelwa ubuso lalisenzeka 'edolobheni' elihlukile endaweni yonke eliqhele ngamakhilomitha amaningi. Lokhu kuhlolwa akuzange kuveze izici. Kwakungashicilelwa. Ubuqili bayo abuzange budalulwe. Noma kunjalo, kukhombisa ngokusobala ukuthi ukubonwa kobuso kuzothunyelwa kanjani emaphoyiseni asopha. Ngokufanayo neLondon, lolu vivinyo luthathe ama-boulevards asedolobheni ngewashi elinabantu abangaba ngu-2,000 XNUMX. Kunoma ikuphi, lokhu kuhlolwa kugxile 'ekumiseni nasekusesheni', ngokubonwa kobuso kuma-bodycams, esikhundleni se-CCTV noma amaveni wokubuka. Ukuhlolwa kufaka phakathi izikhulu ezimbalwa ezigqoke amagajethi asebenza ngokuqhubekayo kusuka kuhlu olufanayo lokubuka. Ngaphakathi kwamahora ambalwa okuqala, kuthathwe okubili ngemuva kokufana kokubona kobuso okusebenzayo kusuka kulezo zinhlaka zomzimba. Abasolwa njengamanje basolwa ngamacala.
Ukuma nokusesha kuyaphazamiseka. Amandla anjalo aya emgogodleni wobuphoyisa ngokuvuma, ukuletha izingqinamba mayelana nokuphamba kanye nokuthambekisa nokugwema. Ngaphandle kokuhlaziywa, ivame ukuba namandla amakhulu, ithathe izikhali endleleni futhi ithumbe labo abakhiyiwe nokhiye. Ukuqinisekiswa komlingiswa kuyisihluthulelo secebo. Njengoba kugxilwe kulawo okumele amiswe. Ama-bodycams aqashelwa isiqinisekiso sobuso bakho ayabhekwa futhi ahlolwe ngokunembile, wonke njengokuyalelwa nasendleleni. Amaqembu aziwayo anecala, abantu bokuxhamazela - noma ngabe bahluliwe noma cha,
izingane ezingavikeleki nabadala, konke kungabonakala zonke izinto ezibhekwayo. Njengomhlahlandlela wolwazi olwaqhubekisela phambili umsebenzi wobuphoyisa unikeza izinzuzo zangempela. Izindatshana ezibhekiselwe ngaphezulu zazenziwe nje zafinyeleleka ngamasu anjalo. Kulokhu, kwaletha inqubo yokuhambisa izidumbu phezu kwedolobha. Imiphumela ibingavikeleki.
Ukusetshenziswa kokuqashelwa kobuso kuma-bodycams ngokungeziwe kunikezela ukumelana nezinsolo zokuqalwa kobuhlanga. Izindlela zingasethelwa ukugwema izikhulu zibheke lezo ezingabonwa ukuqashelwa ebusweni, noma ngabe zimiswe nini. Lapho kwenziwa khona izinsolo zokumisa nokusesha okungaphezulu kobuningi bezinga eliphansi kumanethiwekhi asobala, ukuqashelwa kobuso kumzimba wesidumbu kunikeza ukulingana. Yile ndlela yokuzivikela ezosiza ukwabiwa okufushane okwengeziwe.
Ukuqashelwa kobuso kwizikhwama zomzimba nakho kuzonikeza isiqiniseko esisizayo sokufana nokuqhamuka ezimotweni ezibukwayo namakhamera we-CCTV. Ngemuva komdlalo oyisisekelo, isikhulu ngokuhamba sisondela kulowo muntu futhi sigijime isheke lesibili kwikhamera yomzimba, sivela kulolo hlu olufanayo. Uma nje kunomdlalo ngokufanayo noma yini iyiswa phambili. Ngokwami, lokhu kuvikela izinto ezibonakalayo ezimweni okuthiwa zingezamanga. Ngaphezu kwalokho kunikeza umuntu kusosesheni ngamunye ngaphambi kokuba kwenziwe isiphetho esikhulu sokubanjwa.
I-Edge Artificial Intelligence Emsebenzini:
Ukuhleleka okunjalo kokuqashelwa kobuso esizokubona khona manjalo. Ukuxhumeka kwamakhamera ahlukahlukene kumarekhodi afanayo wewashi, nakwelinye. Ukushukumisela ukuphatha omakhalekhukhwini kuvula izinzuzo eziningi kakhulu zolwazi olunqenqemeni. I-intelligence eyenziwe ngokweqile kumaselula angaxhuma omunye komunye njengoba nje kuyindawo okugxilwe kuyo. Amandla okugcina egijimisa kusuka kumarekhodi wewashi ahlukahlukene, ahlukanisile futhi avumelanisiwe. Zonke ziphila futhi ngokuqhubekayo.
Uma kwenzeka kwenzeka, njengoba isithombe solwazi sishintsha, wonke amakhamera - kufaka phakathi ama-bodycams - aqabuleka ngokungapheli. Inzuzo ongayikhetha yalokhu ukuthi kungenzeka ukusebenzisa amakhamera omzimba anqenqemeni ukunikeza umentshisi oyisisekelo, ngokunciphisa isigaxa, nomdlalo ngaleso sikhathi othunyelwe kohlaka olususelwa efwini olusebenzisa imoto efanayo ye-AI, noma enye i-AI motor, noma izinjini eziningi ze-AI, ukunikeza isiteshi esiqonde ngqo ngaphambi kokuthi noma yikuphi 'ukuxhumanisa' kukhonjiswe kumlawuli. Iningi lokho kuzokwenzeka kumasekhondi ambalwa.
Imiphumela izosondela ku-100% engenakuphikwa.
Lokhu kufanele kube unyaka lapho ukuqashelwa kobuso kuzamazama ngezinsolo zokuthambekela nephutha elingatholakali. Kufanele kube unyaka lapho kunesiqinisekiso sokuthi akuzona zonke izintuthuko zokuqashelwa kobuso ziyafana. Kufanele kutholwe izinsimbi ezahlukahlukene ngezinhloso ezahlukahlukene. Futhi, ukuhlolwa okuyinyumba kwama-motors anjalo ezimweni ezilawulwayo kufanele kunikeze indlela kwezinkomba zangempela zamakhasimende kanye nokuqinisekiswa kwemiphumela.
I-bodycams yokuqala esebenza namuhla igxile kuvidiyo ye-akhawunti yezinhlaka zokuphathwa kobufakazi. Njengamanje, i-Bodycam 2.0 izohambisa ukugxilwa kuphele ukuchitheka kwevidiyo, ukubonwa kobuso negajethi ye-Edge-AI. Lo nyaka ozayo wezinhlaka zomzimba ze-IoT uzojoyina izigidigidi zamanye amagajethi we-IoT azothunyelwa ku-4G naku-5G ahlela eminyakeni ezayo. Kuhloswe ukuthi kuhlelwe, ukwabelana ngolwazi, ukuhlukaniswa ukuphatha kusuka emaphethelweni kuya ekugxileni, lawa magajethi azodlula kude 'uma kwenzeka kunodaba olungalindelekile' ukuqoshwa kwevidiyo kubheke kudivayisi eyisisekelo yamaphoyisa. Ekugcineni, ukuxubana kuzobona izinhlobo ze-bodycam ezisetshenziswayo namuhla ziguqulwa zibe omakhalekhukhwini abanesibindi, obukhulu kakhulu obuzohlanganisa ikhono lokubamba nokuchitheka ngokuhlolwa kwe-AI onqenqemeni nokwethulwa kwemininingwane ecebile kulesi sikhulu. Isikhathi sekhamera yokurekhoda-isizathu esisodwa sifika ekugcineni.
Ngokuqashelwa kobuso, ingxoxo kanye nengxabano ku-2019 kufanele kube ezungeze imisebenzi engabhalisiwe ngokuphelele yamakhono okukhuthaza nokuphepha kwebhizinisi. Isilumko esenziwe nge-silicon esifakwe kumakhamera we-IP anesizotha, atholakala kubo bonke. Ngike ngachaza ngaphambilini ngezinkathazo okufanele sibe nazo emcabangweni webhizinisi, izikole, amakolishi, okungenzeka ukuthi amawashi omakhelwane ahlela ngokwawo amalungiselelo wokulinda wabantu bokuthatheka, ngenxa yokubanjwa noma ukufakwa kwemininingwane yolwazi. Ukusetshenziswa kwalesi sigameko ekugunyazisweni komthetho kuzoyeka ukuqhekeka kangako.
Ngakho-ke, ngokwezinga lamaphoyisa athintekayo, i-2019 izohlukaniswa njengomzuzu ocacisayo wokuqashelwa ebusweni. Ukuhlolwa kuzoshintsha kube izinhlangano. Ukuhlelwa kuzothela imiphumela. Izingxabano zizonqotshwa. Iningi lomphakathi ojwayelekile, ekugcineni, lizonquma ngokusondelana nokuphepha kwasekhaya kanye nenhlala-kahle phezu kokuvikelwa kokulawulwa. Ngenxa yezingcingo eziningi zemikhawulo kanye nemihlahlandlela, isibuyekezo esabiwe kuleli sonto lamanje sathola ukuthi i-18% yabantu baseMelika yokwemukela ukwamukelwa kobuso kufanele icindezelwe ngokucophelela kulimaze ukuvikeleka okuvulekile. Futhi, le indawo yezidumbu ezenza uphawu lwazo. Ngethuba elifanele lokuthi singalungiselela amapholisa ethu ukubona umuntu ngamunye owaziwayo onecala, umuntu ngamunye ongaziwa wexhala, ingane ngayinye ekhulile noma elahlekile, kuya ku-99% noma kuhlonishwe ngokunembile, ngaleso sikhathi. Zonke izinto ezibhekwayo, njengamanje singakwazi.
Ukukhuthaza Ukuqashelwa Kwobuso Kwabaphathi Basezomthetho Zomthetho I-body-Worn Camera igcine ukuguqulwa: I-December 5th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3912 Ukubuka kwe-4 Namuhla